Vaovao - Tombony efatra amin'ny teknolojia fanontana inkjet piezoelectric
Tombony efatra amin'ny teknolojia fanontana inkjet piezoelectric
Araka ny fantatsika rehetra, ny teknolojia inkjet thermal foam dia nanjaka tamin'ny tsenan'ny mpanonta inkjet lehibe nandritra ny taona maro. Raha ny marina, ny teknolojia inkjet piezoelectric dia nanangana revolisiona tamin'ny teknolojia inkjet. Efa ela no nampiharina tamin'ny mpanonta birao. Miaraka amin'ny fanatsarana sy fahamatoran'ny teknolojia dia nivoaka ihany koa ny mpanonta printy inkie piezoelectric endrika lehibe tato anatin'ny taona vitsivitsy.
Araka ny lazain'ny anarany, ny fitsipiky ny haitao inkjet amin'ny famolavolana hafanana dia ny fampiasana fanoherana kely hanafana ny ranomainty haingana, ary avy eo mamorona miboiboika avoaka. Ny fitsipiky ny inkie piezoelectric dia mampiasa kristaly piezoelectric mba hisy fiantraikany sy oscillate diaphragm raikitra amin'ny lohan'ny pirinty ka esorina ny ranomainty amin'ny lohan'ny pirinty.
Avy amin'ireo fitsipika voalaza etsy ambony ireo, azontsika atao ny mamintina ny tombony azo amin'ny teknolojia inkjet piezoelectric rehefa ampiharina amin'ny asa fanontana endrika lehibe:
(1) Mifanaraka amin'ny inks hafa
Ny fampiasana piezoelectric nozzles dia mety ho malefaka kokoa amin'ny fisafidianana inks misy endrika samihafa. Satria mila manafana ny ranomainty ny fomba inkjet amin'ny foam foam, ny fifangaroan'ny simika amin'ny ranomainty dia tsy maintsy ampifanarahana amin'ny cartridge ink. Satria ny fomba inkjet piezoelectric dia tsy mila manafana ny ranomainty, ny safidin'ny ranomainty dia mety ho feno kokoa.
Ny fanehoana tsara indrindra an'io tombony io dia ny fampiharana ny ranomainty misy loko. Ny tombony amin'ny ranomainty pigment dia ny fanoherana kokoa ny taratra UV noho ny ranomainty (Dye based) ary mety haharitra kokoa any ivelany izany. Mety hanana an'io toetra io izy satria ny molekiola misy loko ao amin'ny ranomainty pigment dia mirona mivondrona ho vondrona. Taorian'ny nampidiran'ny taratra ultraviolet ny sombin-kazo namboarin'ireo molekiola pigmenta, na dia potika aza ny sasany amin'ireo molekiola pigmenta, dia mbola misy molekiola misy loko ihany koa hitazomana ilay loko tany am-boalohany.
Ho fanampin'izany, ny molekiola molekiola koa dia hamorona kintana kristaly. Eo ambanin'ny taratra ultraviolet dia hanaparitaka sy hisitrika ny ampahany amin'ny angovo taratra ny kofehy kristaly, amin'izay hiarovana ny sombintsombin'ny pigment amin'ny fahasimbana. Zava-dehibe indrindra io endri-javatra io.
Mazava ho azy, ny ranomainty pigment dia misy ihany koa ny tsy fahampiana, ny tena miharihary dia ny fisian'ny pigment amin'ny toetran'ny poti ao anaty ranomainty. Ireo poti-javatra ireo dia hanaparitaka ny hazavana ary hahatonga ny sary ho maizina. Na dia misy mpanamboatra mampiasa ink pigment aza amin'ny mpanonta printy inkjet maintso taloha, noho ny toetran'ny polymerisation sy ny fipetrahan'ny molekiola pigmenta dia tsy azo ihodivirana fa ho voahitsakitsaka ny volony. Na dia hafanaina aza dia hiteraka ranomainty ihany. Ny fifantohana dia sarotra kokoa ny mahazo azy, ary ny fanakanana dia matotra kokoa. Taorian'ny fikarohana nandritra ny taona maro, misy ihany koa ny inks pigment nohatsaraina ho an'ny mpanonta printy inkjet mafana eny an-tsena ankehitriny, ao anatin'izany ny simia simika nohatsaraina mba hampihena ny fitambaran'ny sombintsombiny, ary ny fikolokoloana tsara kokoa dia mahatonga ny savaivon'ireo molekiola maivana kokoa noho ny halavan'ny ny spectrum iray manontolo hialana amin'ny fanaparitahana hazavana. Na izany aza, nitatitra ireo mpampiasa fa mbola misy ny olana manentsina, na maivana ihany ny lokon'ny sary.
Ireo olana etsy ambony dia hahena be amin'ny teknolojia inkjet piezoelectric, ary ny fanosehana ateraky ny fanitarana ny kristaly dia afaka miantoka fa tsy voahitsakitsaka ny nozera, ary ny fitanana ranomainty dia azo fehezina tsara satria tsy voakasiky ny hafanana. Na, ny ranomainty matevina koa dia mety hampihena ny olan'ny loko marevaka.
(roa) dia azo ampiarahina amin'ny ranomainty atody mavesatra avo lenta Piezoelectric nozzles dia afaka misafidy inks misy atiny matevina avo kokoa. Amin'ny ankapobeny, ny atin'ny ranon'ny ranomainty ampiasaina amin'ny mpanonta printy inkjet foam dia mila anelanelan'ny 70% sy 90% hitazonana ny vazaha hisokatra sy hiara-miasa amin'ny vokatry ny hafanana. Ilaina ny mamela fotoana ampy ho maina ny ranomainty amin'ny haino aman-jery nefa tsy manaparitaka ivelany, fa ny olana dia ny fisorohana ny fanontam-pirinty inkjet vita amin'ny hafanana avy amin'ny fampitomboana ny hafainganan'ny fanontana. Noho io antony io, ny mpanonta printy inkjet piezoelectric amin'izao fotoana izao eny an-tsena dia haingana kokoa noho ny mpanonta foaming.
Hatramin'ny fampiasana piezoelectric nozzles dia afaka misafidy ranomainty misy atiny matevina avo kokoa, dia ho mora kokoa ny fampandrosoana sy ny famokarana haino aman-jery tsy misy rano ary ny fanjifana hafa, ary ny haino aman-jery novokarina dia mety hanana fampisehoana tantera-drano avo kokoa ihany koa.
(2) Mazava kokoa ny sary
Ny fampiasana piezoelectric nozzles dia afaka mifehy tsara kokoa ny endrika sy ny haben'ny teboka ranomainty, vokatr'izany dia misy vokany mazava kokoa ny sary.
Rehefa ampiasaina ny haitao mafana inkjet mafana, ny ranomainty dia milatsaka eo ambonin'ny mpanelanelana amin'ny endrika splash. Ny ranomainty inkie piezoelectric dia ampifandraisina amin'ny mpanelanelana amin'ny endrika Lay. Amin'ny alàlan'ny fampiharana ny herinaratra amin'ny kristaly piezoelectric sy fampifanarahana ny savaivon'ny inkjet, ny habe sy ny endrik'ireo teboka ranomainty dia azo fehezina tsara kokoa. Noho izany, amin'ny fanapahan-kevitra mitovy amin'izany, ny famoahana sary an'ny mpanonta printy inkie piezoelectric dia hazava kokoa sy ho sosona kokoa.
(3) Manatsara sy mamoa tombony
Ny fampiasana teknolojia inkjet piezoelectric dia afaka mamonjy ny olana amin'ny fanoloana lohan'ny ranomainty sy cartridges ranomainty ary mampihena ny vidiny. Ao amin'ny teknolojia inkjet piezoelectric dia tsy hafanaina ny ranomainty, ampiarahina amin'ny tsindry vokarin'ny kristaly piezoelectric, ny piezoelectric nozzle dia azo ampiasaina maharitra amin'ny teoria.
Amin'izao fotoana izao, ny orinasa Yinghe dia manolo-tena amin'ny famokarana mpanonta pirinty piezoelectric haingana kokoa sy mazava kokoa. Amin'izao fotoana izao, ny mpanonta 1.8 / 2.5 / 3.2 metatra novokarin'ny orinasanay dia arahabain'ny ankamaroan'ny mpanjifa anatiny sy ivelany. Ny milina inkjet piezoelectric antsika dia mandray automatique Ny rafitra fanesorana ranomainty sy ny rafitra fanesorana mandeha ho azy dia miantoka fa tsy voahitsakitsaka ny fantsom-panafody ary tsara foana ny fantsom-panafody. Ny rafitra dia manome maody fanontam-pirinty 1440 avo lenta sy avo lenta. Afaka misafidy fitaovana isan-karazany amin'ny fanontana ireo mpampiasa. Ny fampiharana ny rafitra fanamainana telo sy ny fanamainana rivotra dia mety hahatratra eo no ho eo Ny famafazana sy ny asan'ny maina, ny vidin'ny famokarana faran'izay ambany, avelao hahazo haingana sy mora ny fiverenana.